RASMI: FIFA oo ganaax dul dhigtay kooxda Man City sababa la xiriira inay ku xad gudubtay sharciga dhaqaale wanaaga – Gool FM
(Yurub) 14 Agoosto 2019. FIFA ayaa go’aansatay inay ciqaabo kooxda Manchester City kaddib markii ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaaga ee xiriirka kubadda cagta ee Yurub.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaaca ka qaaday in Manchester City ay dul dhigeen ganaax lacageed ee gaarsiisan 370,000 Swiss francs oo u dhiganta 15.000 oo gini, sababa la xiriira inay ku xad gudbeen sharciga dhaqaale wanaaga.
FIFA ayaa waxay kaliya dul dhigtay Man City ganaax lacageed, waxayna ka bad baadeen in laga ganaaxo suuqa kala iibsiga, sida ku dhacday Chelsea bilooyin kahor.
Manchester City ayaa jabisay sharciga dhaqaale wanaaga ee heshiisyada qaar ee loogu talagalay ciyaartoy da’adoodu ka yartahay 18 sano, taasoo ugu dambeyntii sababtay inay marto ganaax lacageed oo kaliya.
Waxaa jiray warar sheegayay in Manchester City ay halis ugu jirto in laga saaro tartamada Yurub ama laga joojiyo inay sameyso heshiisyo cusub, laakiin ganaaxa ayaa wuxuu noqday kaliya dhaqaale ahaan.